ကိုကင်း - ပလပ်စတစ်အတွက် Histone Methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းကဏ္ ((2010)
သိပ္ပံ။ 2010 ဇန်နဝါရီလ 8; 327(5962): 213 ။
မှ Ian ဝင်္,1 ဟားဘတ်အီး Covington, III ကို,1 ဒါဝိဒ်သည်အမ် Dietz,1 Quincey LaPlant,1,2 ဝီလျံ Renthal,2 Scott ဂျေ Russo,1 မက်စ်စက်ပြင်,2 ယေဇကျေလ Mouzon,1 Rachael အယ်လ် Neve,3 စတီဖင်ဂျေ Haggarty,4,5 Yanhua Ren,1 Srihari C. Sampath,6 Yasmin အယ်လ် Hurd,1 ရှင်ပေါလု Greengard,7 အလက်ဇန်းဒါး Tarakhovsky,6 အန်း Schaefer,7 နှင့် အဲရစ်ဂျေ Nestler1,*
မျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲကင်းစွဲအခြေခံစေခြင်းငှါအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အပြုအမူများတွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ histone3lysine9(H3K9) dimethylation များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်နှင့် lysine ကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အမူအကျင့် plasticity အတွက် G9a dimethyltransferase ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် H3K9 dimethylation ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ T ကhistone methylation ၌သူ၏လျော့ချရေးအတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ကူးယူအချက်ΔFosBနေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသောဤဦးနှောက်ဒေသအတွက် G9a များ၏ဖိနှိပ်မှုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ခြွင်းချက် mutagenesis နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇလွှဲပြောင်းအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ G9a downregulation နျူကလိယ၏ dendritic ကျောရိုး plasticity အားဖြင့်ကင်း၏ရေရှည်လုပ်ရပ်များအတွက် histone methylation များအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍတည်ထောင်, ကိုကင်းဘို့အာရုံခံခြင်းနှင့်တိုးမြှင် preference ကို accumbens တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းထိတွေ့ခြင်းဟာနျူကလိယ accumbens အတွင်းဗီဇစကားရပ်များနှင့်ပြောင်းလဲအာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမြဲအပြောင်းအလဲများကို (NAc), ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်1-2). Chromatin ပြုပြင်ကင်းစွဲ၏ရှုထောင့်အခြေခံစေခြင်းငှါဤအဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ထစ်အငေါ့မှတ်တမ်းအပြောင်းအလဲများအတွက်အရေးပါသည် (3-9) ။ histone acetylation နှင့် phosphorylation ပြောင်းလဲမှုများမှဦးဆောင်သည့် chromatin enzymatic စက်ပစ္စည်းများ၏တိုက်ရိုက်ကင်း-သွေးဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံ, (ရာမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် NAc ရလဒ်များကိုအတွက် chromatin ဖွဲ့စည်းပုံမှာကိုကင်းစည်းမျဉ်း,4, 7-9); သို့သော် histone methylation ထိန်းချုပ်အင်ဇိုင်းတွေအဘို့အခန်းကဏ္ဍသေးစုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။
microarrays မှ coupled chromatin immunoprecipitative (chip-Chip) ဖော်ထုတ်ပြောင်းလဲဖိနှိပ် histone H3 lysine9(H3K9) ၏ပုံစံများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းကုသမှုအပြီးတွင် NAc အတွက်တိကျသောမျိုးရိုးဗီဇမြှင့မှာ 27 (H3K27) methylation (သုံးပြီးတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ကမကထခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ6) ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် (H3K9 သို့မဟုတ် H3K27 methylation ထိန်းချုပ်ဖို့လူသိများကြသည်မြောက်မြားစွာ lysine methyltransferases (KMTs) နှင့် demethylases (KDMs) profiledသင်္ဘောသဖန်း။ 1A). နှစ်ဦးစလုံးမျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးသိသိသာသာ downregulated အခါနှစ်ခုသာအင်ဇိုင်းတွေ, G9a နှင့် GLP, 24 နာရီထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးမြဲမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းပြသ. G9a နှင့် GLP အထူးသ H3K9 (H3K9me2) ၏ dimethylation catalyze သောကြောင့်, ကိုကင်းများက၎င်းတို့၏ downregulation နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ် euchromatic H3K9me2 ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် (ဒီအချိန်မှာရှုလေ့လာလျော့နည်းသွားသင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ ဆနျ့ကငျြ, heterochromatic H3K27 methylation ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့် (ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့် unaltered ကျန်ရစ်အွန်လိုင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့အတွက်သင်္ဘောသဖန်း။ S1) ။ နှစ်ဦးစလုံး catalytic လှုပ်ရှားမှုက၎င်း၏မြင့်မားမှုကြောင့် စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် (10), ကျနော်တို့နောက်ထပ် NAc အတွက်အထပ်ထပ်ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါ G9a ဖိနှိပ်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထွက်ထားကြ၏။ ယင်း၏ mRNA ၏အဆင့်ဆင့်နဲ့တူ G9a ပရိုတိန်း၏အဆင့်ဆင့်, သိသိသာသာ (ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 24 နာရီသို့လျှော့ချခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ S2) ။ G9a mRNA စကားရပ် NAc အတွက် 35% အထိလျှော့ချခဲ့သော်လည်း, immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် H15K9me21 အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ 3% လျော့နည်းသွားနှင့်ကိုက်ညီ G9a ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ပိုပြီးကျိုးနွံ 2% လျှော့ချရေး, ထင်ရှားသင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ G9a mRNA စကားရပ်လည်းကင်း၏အထပ်ထပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (အောက်ပါ 20% ဖွငျ့ဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ downregulated ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ S3).
ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းတဲ့ΔFosB-မှီခိုယန္တရားမှတဆင့် NAc အတွက် G9a စကားရပ် represses ။ (က) ထပ်ခါတလဲလဲကင်းပြီးနောက် NAc3နာရီအတွက် H9K27 / K24 KMTs နှင့် KDMs ၏ mRNA စကားရပ်။ (ခ) ထပ်ခါတလဲလဲကင်းပြီးနောက် NAc3နာရီအတွက် H9K2me24 အဆင့်ဆင့်။ (C) မျိုးဗီဇ၏ analysis ...
euchromatic H3K9me2 အတွက်ပြောင်းလဲမှု NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်များတွင်မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်ပြောင်းလဲအတူပတျသကျရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့ microarray (ဖြည့်စွက်ကြည့်ရှုကြိုတင်ကင်းထိတွေ့မှုတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ဗီဇစကားရပ် profile များကိုဆန်းစစ်ရန်လေ့လာဆန်းစစ်အလုပ် မျိုးဗီဇစာရင်းအတွက် ဇယား S1-S3) ။ ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ (နှိုင်းယှဉ် acute ကုသနိုင်ရန်တိရစ္ဆာန်တွေကိုတစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ဗီဇစကားရပ် 1 နာရီပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ။ ဤသည်တိုးမြှင့်ဗီဇစကားရပ်နေဆဲထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ၏ 1 တပတ်အကြာတွင်ပေးထားသောတစ်ဦးကိုကင်းစိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, မျိုးဗီဇ၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း (~ 10%) (အထပ်ထပ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ desensitized မှတ်တမ်းတုံ့ပြန်မှုပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 1C; မြင် စားပွဲတင် S1()5) ။ တိုက်ရိုက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်တိုးမြှင့်ဗီဇစကားရပ်ထဲမှာ G9a downregulation ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ကြွက် herpes simplex virus ရဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ထိုး GFP သို့မဟုတ် G9a ဖြစ်စေဖော်ပြ (HSV) virus သယ်ဆောင်လက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိ G9a overexpression ဆုံးဖြတ်ရန်ဆားသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းနဲ့ကုသခဲ့ကြသည် မျိုးဗီဇစကားရပ်၏ထပ်ခါတလဲလဲကင်း-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်ပိတ်ဆို့ဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအောက်ပါစကားရပ်၏မြင့်အဆင့်ဆင့်ပြသ 12 ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်မျိုးဗီဇအစုတခုကနေကျနော်တို့ (G9a သိသိသာသာသောဤမျိုးဗီဇ၏ 50% ၏တိုးမြှင့်စကားရပ်ကိုလျှော့ချကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိစားပွဲတင် S4).
G9a စကားရပ်၏ထပ်ခါတလဲလဲကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုဖျန်ဖြေကြောင်းအထက်မှတ်တမ်းဖြစ်ရပ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့သည်ချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇတစ်ခုမြင့်မားတည်ငြိမ် splice ထုတ်ကုန်ΔFosBတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေး fosB။ ΔFosB (ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့ပြီးနောက် NAc အတွင်းစုဆောင်းပါကတိုးမြှင့်ကင်းဆုလာဘ်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘယ်မှာ11) ။ ΔFosB (ပါဝင်ပတ်သက်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ဦးမှတ်တမ်း Active သို့မဟုတ် repressor ဖြစ်စေအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ3, 5, 6, 12) ။ bitransgenic NSE- အသုံးပြုခြင်းtTA tetOP-Δ×FosB ΔFosBစကားရပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက်ရွေးချယ်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျသောကြွက်, (13), ကျနော်တို့က NAc အတွက် H3K9me2 နှင့် KMTs ၏ကင်းစည်းမျဉ်းအပေါ်ΔFosBစကားရပ်များ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ΔFosB overexpression (နှစ်ဦးစလုံး H3K9me2 ၏အဆင့်ဆင့်လျှော့ချရန်လုံလောက်သောခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1D) နှင့် G9a စကားရပ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1E), အားဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုန်းမှာ။ ဆနျ့ကငျြ, ΔFosB (အသီးသီး, ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ GLP စကားရပ်ကိုလျှော့ချနှင့် SUV39H1 နှင့် EZH2 မသက်ရောက်ခဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး H3K9 နှင့် H3K27 ဘို့အင်ဇိုင်းတွေ trimethylating ဘူးသင်္ဘောသဖန်း။ S4) ။ လွတ်လပ်သောΔFosB overexpression စနစ်အား အသုံးပြု. ဤအ data တွေကိုအတည်ပြုဖို့, wildtype အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် GFP သို့မဟုတ်ΔFosBဖြစ်စေဖော်ပြ Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) virus သယ်ဆောင်၏နှစ်နိုင်ငံအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ΔFosB၏ viral-mediated overexpression (ဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ G9a စကားရပ်၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့သင်္ဘောသဖန်း။ 1E).
G9a ၏ထိုကဲ့သို့သောသိသာနှင့်တိကျသောစည်းမျဉ်း NAc အာရုံခံအတွက်အထူး G9a စကားရပ်ပြောင်းလဲကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးခံရ။ Wildtype ကြွက် GFP သို့မဟုတ် G9a ဖော်ပြ HSV virus သယ်ဆောင်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ထိုးလက်ခံရရှိပြီးတော့မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ဘက်မလိုက်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုပါရာဒိုင်း, သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ NAc အာရုံခံအတွက် G9a ၏ viral overexpression (အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအောက်ပါအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ G9a overexpression သိသိသာသာ (GFP overexpressing တိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းဘို့ preference ကိုလျော့နည်းသွားသင်္ဘောသဖန်း။ 2B), နှင့် NAc အတွက် H3K9me2 အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ G9a တစ် catalytically သေပြီ Mutant (G9aH1093K) ၏ Overexpression (14) (ကိုကင်း preference ကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါသင်္ဘောသဖန်း။ 2B) နှင့်မျှမကဤဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ H3K9me2 အဆင့်ဆင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2C).
NAc အတွက် G9a ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူ plasticity ထိန်းညှိ။ (က) NAc အတွက် HSV-mediated Transgene စကားရပ်၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်။ အဆိုပါ Coronal ဦးနှောက်အချပ်၏ကာတွန်း mouse ကိုဦးနှောက် Atlas ထဲကနေယူခဲ့ပါတယ်။ (ခ) ကိုကင်းဘို့အေးစက်သောအရပ် preference ကိုနှင့် ...
နောက်ထပ်ကိုကင်းများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများအတွက် G9a ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာဖို့နှင့်ထို့ထက် ပို. အထူး NAc, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ G9a အတွက် G9a စကားရပ်၏ထပ်ခါတလဲလဲကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုတူတဲ့ရန်FL / FL ကြွက် (14က) ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် Cre recombinase သို့မဟုတ် GFP ဖော်ပြ AAV virus သယ်ဆောင်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ immunohistochemically အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သော NAc အတွက် G9a ၏ AAV-Cre knockdown, (သင်္ဘောသဖန်း။ S5), သိသိသာသာ (ရာအရပျအေးစက်စမ်းသပ်ချက်အတွက်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် NAc အတွက် H3K9me2 အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့သင်္ဘောသဖန်း။ 2D, E ကို) ။ G9a နှင့် GLP ၏တစ်ဦးကစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင် pharmacological inhibitor, BIX01294 (15-16), အင်ဇိုင်းတားစီးအလားတူကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် G9a နှင့် GLP ၏ pharmacological တားစီးသိသိသာသာ (ကိုကင်းဘို့ preference ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် NAc အတွက် H3K9me2 လျော့နည်းသွားသင်္ဘောသဖန်း။ 2F, G).
ကိုကင်းများထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး (NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆကိုတိုးပွားစေ17ဤအအာရုံခံပေါ်သို့ excitatory glutamatergic synapses မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်), လုပ်ငန်းစဉ် (18-19) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု (17, 20). ကျနော်တို့အရှင်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းအားဖြင့် NAc အတွက် G9a လှုပ်ရှားမှု downregulation NAc အာရုံခံ၏ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုထိန်းညှိဖို့ကိုကင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါ, တွေးဆ။ Anti-G9a antibody ကိုအတူ chromatin immunoprecipitative (chip) ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ (ယခင်ကကင်း-သွေးဆောင် dendritic plasticity ်ပတ်သက်နေထားပြီးတစ်ဦးချင်းစီ၏ NAc အတွက်အများအပြား putative G9a ဗီဇပစ်မှတ်များကိုတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 3A()20-26) ။ ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးသိသိသာသာ binding G9a လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့အဖြစ်ဤအမျိုးဗီဇမြှင့ (အနည်းဆုံး H3K9me2 ၏အဆင့်ဆင့်,သင်္ဘောသဖန်း။ 3B) ။ ဆနျ့ကငျြစူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးလျှင်မြန်စွာကင်း၏စူးရှသောဆေးထိုးပြီးနောက် NAc9နာရီအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးလာ G9a စကားရပ်နှင့်ကိုက်ညီဤတူညီသောမျိုးဗီဇမြှင့အချို့မှ G1a စုဆောင်း (သင်္ဘောသဖန်း။ S6) ။ G9a သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇမြှင့မှာ binding က၎င်း၏စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်စူးရှသောအောက်ပါ G9a စုဆောင်းမှုအတွက်ကွဲပြားမှုအားဖြင့် NAc အတွက် G9a ၏ပြောင်းလဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိအဖြစ်မသိရသေးဖြစ်နေဆဲ vs. ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှု။
NAc အတွက် G9a ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုး plasticity ထိန်းညှိ။ (က) အသီးသီး9သို့မဟုတ် 1 နာရီမှာ, ကိုကင်းနှင့်အတူ acute သို့မဟုတ်အကြိမ်ကြိမ်ကုသတိရိစ္ဆာန်များကနေ NAc အတွက် quantitative G24a chip ။ APRT တစ်အနုတ်လက္ခဏာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒေတာဆွေမျိုးအဖြစ်တင်ဆက်ကြသည် ...
အဆိုပါ NAc အတွက်မြောက်မြားစွာ plasticity-related မျိုးဗီဇ၏ G9a ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့အထပ်ထပ်ကိုကင်းကုသမှုအောက်ပါဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌ G9a ထုတ်ဖော်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးပိတ်ဆို့ဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်ရှိမရှိတိုက်ရိုက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc အတွက် dendritic ကျောရိုးသော induction မြှင့်တင်ရန်ယခင်ကသရုပ်ပြတစ်ဦးကိုကင်းကုသမှု protocol ကိုအသုံးပြုခြင်း (20), ကျနော်တို့ HSV-GFP သို့မဟုတ် HSV-G9a ဖြစ်စေနဲ့အတူထိုးသွင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူသဘောတူညီချက်မှာတော့ကျနော်တို့ (ကိုကင်းကုသမှုအောက်ပါ G9a overexpression နေဖြင့်လုံးဝပိတ်ဆို့ခဲ့ကာအကျိုးသက်ရောက်မှု NAc အတွက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်သိသိသာသာတိုးလေ့လာတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 3C) ။ တစ်ဦးတည်း G9a overexpression ကိုကင်းများ၏မရှိခြင်းအတွက် NAc dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုလျော့ချဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ , G9a သည်ဤဒေတာဖြည့်စွတ်ရန်FL / FL ကြွက် HSV-Cre နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆများထိုး quantified နှင့်ကိုကင်းများ၏မရှိခြင်းအတွက် HSV-GFP လက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ G9a ထုတ်ဖော် Knockdown သိသိသာသာ (NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်သင်္ဘောသဖန်း။ 3C).
ထပ်ခါတလဲလဲကင်းပြီးနောက် NAc အတွက် G9a downregulation ΔFosBကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားပေးထားကျနော်တို့လာမယ့်ဒီကူးယူအချက် NAc dendritic ကျောရိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ထိုနည်းတူပါဝင်ပတ်သက်ရှိမရှိဆန်းစစ်. ΔFosBယခင်က Cdk5 နှင့်NFκB subunits အပါအဝင်ယင်း၏ပစ်မှတ်အတော်ကြာထိုကဲ့သို့သော dendritic plasticity, ရန်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်နွယ်နေရသေးပေမယ့်ဒါပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ (20-23), နှင့် NAc အာရုံခံအတွက်ΔFosBရဲ့ဇွဲစကားရပ်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းကုသမှုပြီးနောက်တိုးမြှင့် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည် (27) ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ (G9a နှင့် H3K9me2 စကားရပ် downregulated သောကိုကင်းများ၏မရှိခြင်းအတွက် bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB၏ induction တွေ့ရှိခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ 1D, E ကို), G9a မြောက်မြားစွာ plasticity-related ဗီဇမှ binding လျော့နည်းသွား, အရာအတော်များများလည်း (ΔFosBကိုယ်တိုင်ကတိုက်ရိုက်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပြခဲ့ကြသင်္ဘောသဖန်း။ 3D()3, 6). ကျနော်တို့လာမယ့်, အ NAc အတွက်ΔFosB၏ဗိုင်းရပ်စ် overexpression သိသိသာသာ Basal အခြေအနေများအောက်တွင် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ ကြောင်းအလားတူ (အထပ်ထပ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 3E). ပြောင်းပြန်ΔJunD၏ NAc, ΔFosBမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှု antagonizes တစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ် Mutant ပရိုတိန်းအတွက် overexpression, အ NAc အတွက် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးတိုးမြှင့်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းများ၏စွမ်းရည်ကိုပိတ်ဆို့ (သင်္ဘောသဖန်း။ 3C).
ΔFosBအဆိုပါ NAc အတွက် G9a စကားရပ်ကိုထိန်းညှိနှင့်ΔFosBနှင့် G9a တူညီသောပစ်မှတ်မျိုးဗီဇအချို့ကိုထိန်းညှိကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေး, ΔFosBနှင့် G9a အကြားကတခြား interaction ကဆနျးစစျဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ G9a အဆင့်ဆင့်ပုဖို့ G9a ၏စညျး, တိုးပွားလာသောအခါစူးရှသောကိုကင်း, ပြီးနောက် fosB G9a စကားရပ်နှိမ်နင်းခံခဲ့ရသည့်အခါမျိုးဗီဇ G9a ယင်းမှ binding, ပြီးနောက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းစဉ်တိုးပွားလာခဲ့သည် fosB မျိုးဗီဇ (လျော့နည်းသွားခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 3A) ။ ထပ်ခါတလဲလဲကင်းဘို့စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သော binding G9a လျော့နည်းသွား က c-fos, G9a binding ထပ်ခါတလဲလဲကင်းတိုးပွားလာသည်အဘယ်မှာရှိ (သင်္ဘောသဖန်း။ S7) ။ ဤသည်နှင့်မတူဘဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် fosB, က c-fos (နာတာရှည် psychostimulant ထိတွေ့အသုံးပြုပုံသွေးဆောင်ဘဲ, ဖိနှိပ်နေသည်5) ။ bitransgenic ကြွက်တွေမှာΔFosB overexpression သိသိသာသာမှ binding G9a လျော့ချဖို့လုံလောက်ခဲ့တယ် fosb မျိုးဗီဇ (သင်္ဘောသဖန်း။ 3D) ။ ထို့အပွငျ G9a overexpression (အထပ်ထပ်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါတိုးလာΔFosBစကားရပ်လျှော့ချရန်လုံလောက်သောခဲ့သည်စားပွဲတင် S4). ဤရွေ့ကားဒေတာ G9a ပိုင်းတွင်စူးရှသောကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ΔFosB၏ induction ကန့်သတ်ခွထားတဲ့ autoregulatory ကွင်းဆက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ΔFosBအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစုဆောင်းအဖြစ်သို့သော်ကြောင့် G9a represses နှင့်အားဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နောက်ထပ်သော induction potentiates ။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ NAc အတွက် histone lysine methylation ကင်းတုံ့ပြန်အာရုံခံဗီဇစကားရပ်ကိုထိန်းညှိအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ G9a နှင့် H3K9me2 ၏ဖိနှိပ်မှု dendritic plasticity ၏ထစ်အငေါ့ပုံစံများကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများမြောက်မြားစွာမျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်း activation မှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကိုကင်း preference ကိုအားပေးအားမြှောက်။ ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားများမှတဆင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရသည့်မျိုးဗီဇ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရရှိမှုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ရှုပ်ထွေးသောဇီဝအခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးတက်စေမည်စွဲလမ်းမမှန်ပိုမိုထိရောက်သောကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကူညီနိုင်ဘူး။
အတူအဆက်မပြတ်အပူချိန် (ကို C ° 12) မှာမဟုတ်ရင်ဖော်ပြထား, ကြွက် (7 pm တွင်: 00 မှ7AM 00 ကနေအပေါ်ထွန်း) တစ်ဦး 23 နာရီအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအတူကိုလိုနီအတွက်လှောင်အိမ်နှုန်းမှငါးလေးသျောခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင် ကြော်ငြာ libitum ရေနှင့်အစားအစာမှဝင်ရောက်ခွင့်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန် protocols များ UT အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာနဲ့ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်းနှစ်ဦးစလုံးမှာ IACUC ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ကိုကင်းစမ်းသပ်ချက် [immunohistochemitry အနောက်ပိုင်းချေ, အရေအတွက် PCR (qPCR), microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် chromatin immunoprecipitative (chip)] အဘို့, 8-ရက်သတ္တပတ်အရွယ်အထီး C10BL / 57J ကြွက်မှ 6- အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ '' ဆား '(7 ကုသဆား, ip),' 'စူးရှသော' 'ကိုကင်း (6 ကုသဆား + တဦးတည်းကုသမှု 20 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip mg) သို့မဟုတ်' 'ထပ်ခါတလဲလဲ' 'ကိုကင်း (7 ကုသ 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဖြစ်စေ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိ ကိုကင်း-HCl, ip) ။ ကြွက်နောက်ဆုံးကုသမှုအောက်ပါ 1 နာရီသို့မဟုတ် 24 နာရီဖြစ်စေမှာယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ microarray လေ့လာမှုများအဘို့, တိရိစ္ဆာန်များ '' ဆား '(15 ကုသဆား, ip) တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူနေ့စဉ်ကုသခံခဲ့ရသည်,' စူးရှသော '' ကိုကင်း ( 'စူးရှ + ထပ်ခါတလဲလဲ' 'ကိုကင်း, (14 ကုသဆား + 1 ကုသမှု 20 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip mg)7/ ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip) သို့မဟုတ် '' ထပ်ခါတလဲလဲဆုတ်ခွာ + စူးရှသော '' ကိုကင်း mG 8 ကုသဆား + 20 ကုသမှု (7 ကုသ 20 ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl +7ကုသဆား + 1 စိန်ခေါ်မှုကုသမှု 20 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl mg / mG ip) နှင့်နောက်ဆုံးကုသမှုပြီးနောက် 1 နာရီယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြွက် singly Post-ခွဲစိတ်သျောခဲ့ကြသည်နှင့်အ 10 နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip MG ။ HSV-GFP နှင့် HSV-G9a-GFP ရောဂါကူးစက်အောက်ပါ dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် microarray validation ကိုအဘို့, ကြွက် '' ဆား '(5 ကုသဆား, ip) သို့မဟုတ်' 'ထပ်ခါတလဲလဲကင်း' (5 ကုသ 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip နဲ့ကုသခဲ့ကြသည် ) ဒီဆေးထိုး protocol ကိုယခင်ကနျူကလိယ accumbens အပေါ်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့သရုပ်ပြခဲ့ပြီးသည်အတိုင်း,3ကာလ၏သင်တန်းကျော် (NAc) herpes simplex virus ကို၏အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းအာရုံခံ (HSV) Transgene စကားရပ် (ဖြည့်စွက် ref S1) ။ dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတှကျအသုံးပွုကြွက်ကနောက်ဆုံးကုသမှုအောက်ပါ4နာရီယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ကြသည်။
NAc အာရုံခံမှကန့်သတ်သည့် G9a မှတ်တမ်း၏ဒေသခံဖျက်မှုကိုသွေးဆောင်ခြင်းငှါ, ကျနော်တို့တခြားနေရာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားခဲ့ကြသည့် floxed G9a allele (များအတွက် homozygous Mutant ကြွက်တွေကိုအသုံးပြုS2) ။ Cre-သွေးဆောင် recombination အဆိုပါ mutated မှတ်တမ်း၏ဒဏ်ဍာရီ-mediated ယိုယွင်းမှဦးဆောင် 22 Out-of-frame ကို splicing မှ exon 25 ထုတ်လုပ်သည်။ ကျနော်တို့ G9a အပြည့်အဝ C57BL / 6J ကြွက်မှ backcrossed ခဲ့ကြွက် floxed ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြွက်2နှင့်7ရက်သတ္တပတ်၏အသက်အရွယ်အကြား GFP သို့မဟုတ် Cre-GFP ဖော်ပြ Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (AAV) virus သယ်ဆောင် (serotype 10) နှင့်အတူ NAc သို့ sterotaxically-ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ Immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တွေ့မြင် Cre-mediated recombination ၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန်အသုံးပြုခဲ့သည် ဖြည့်စွက်ပုံ။ S5) ။ G21a အတွက် recombination ကြွက် floxed ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ဒီအချိန်မှာတည်ငြိမ်ပြီးလုပျသငျခဲ့ AAV9ရက်ပေါင်း Post-ခွဲစိတ်တိရိစ္ဆာန်များထိုးသွင်းအသုံးပြုသောS3-S4) ။ G9a နှင့်ΔJunD overexpression စမ်းသပ်ချက်အလားတူ GFP, wildtype G9a-GFP, catalytically သေပြီ G9aH1093K-GFP သို့မဟုတ်ΔJunD-GFP (တွေ့မြင်ဖြစ်စေဖော်ပြ HSV ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်သုံးပြီးကောက်ယူခဲ့သည် S2 G9a ဆောက်လုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရည်မှတ်အသေးစိတ်ကို) ။ immunohistochemistry ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုလေ့လာအဖြစ် overexpression, ဒီအချိန်မှာလုပျသငျခဲ့ကတည်းက HSV overexpressing ကြွက် Post-ခွဲစိတ်3ရက်ပေါင်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ AAV virus သယ်ဆောင် Transgene ထုတ်ဖော်တိုးချဲ့ကာလလိုအပ်စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သော်လည်းကြောင့် HSV စကားရပ်၏ယာယီသဘောသဘာဝနှင့် AAV စကားရပ်၏သိသိသာသာပိုမိုတည်ငြိမ်သဘောသဘာဝရန်, HSV virus သယ်ဆောင်မြန်ဆန်, ရေတိုရေရှည် Transgene စကားရပ်လိုအပ်စမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံး virus သယ်ဆောင် afferent သို့မဟုတ် efferent အာရုံခံမဆိုရောဂါကူးစက်မှုမရှိဘဲ, ထိုးသွင်းဦးနှောက်ဧရိယာအတွင်းသာအာရုံခံဆဲလ်အသေကောင်ကူးစက်ရန်, ကျယ်ပြန့်ကြိုတင်လေ့လာမှုများအတွက်ပြသခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ pharmacological G9a / GLP inhibitor ကိုအသုံးပြုပြီးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အဘို့, BIX01294 (25 ng / μl), ကြွက် sterotaxically အဆိုပါ NAc သို့နှစ်ခုအရေပြားအောက်ဆုံး Mini-ပန့်များအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံလမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ mini-ပန့်များအပြုအမူအကဲဖြတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးသောအချိန်ကာလအတွင်း 12 ရက်များအတွက်မော်တော်ယာဉ် (0.25 hydroxypropyl β-cyclodextrin) သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုခုများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေ (5 μl / နာရီ) စတင်ကြိုတင် implantation မှ 14 နာရီ activated ခဲ့ကြသည်။
ΔFosB overexpression စမ်းသပ်ချက် [အနောက်ပိုင်းချေ, qPCR နှင့် chip] အထီး bitransgenic NSE- များအတွက်tTA tetOP ×-ΔFosB အဆိုပါ tetracycline ဆင်းသက်လာ doxycycline (doxycycline ချွတ် 10 ရက်သတ္တပတ်) ၏မရှိခြင်းအတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (ΔFosB၏ကြံ့ခိုင် striatal ကန့်သတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစကားရပ်ပြသခွကြွက်, (8 ရက်သတ္တပတ်-ဟောင်း) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်S5) ။ ဤအကြွက်တွေမှာΔFosB overexpression qPCR မှတဆင့်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခဲ့သည်။ NSE- သုံးပြီးတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုဖို့tTA tetOP ×-ΔFosB ကြွက်, wildtype 8-ရက်သတ္တပတ်အရွယ် C57BL / 6J အထီးကြွက် AAV virus သယ်ဆောင် GFP သို့မဟုတ်ΔFosB-GFP ဖြစ်စေဖော်ပြနှင့်အတူ sterotaxically-ထိုးသွင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ခဲ့ကြသည်။ AAV virus သယ်ဆောင်ကြွက် overexpressing ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နှင့် bitransgenic ΔFosBအကြားတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဘို့အခွင့် 8 ရက်သတ္တပတ် Post-ခွဲစိတ်မှာအကျယ်ချဲ့ΔFosBစကားရပ်သေချာစေရန်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဗိုင်းရပ်စ် overexpression Post-ခွဲစိတ်ကုသ (8-gauge NAc လာကြတယ်ထိုး site ကိုအောက်တွင်ခွဲဖြာခဲ့ကြသည်) 15 ရက်သတ္တပတ်မှာ qPCR သုံးပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ qPCR များအတွက်အသုံးမခဲ့ AAV-GFP နှင့် AAV-ΔFosB-GFP overexpressing ကြွက်ဆား (14 ကုသဆား, ip) သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းနဲ့ကုသခံခဲ့ရသည် 14 ရက်သတ္တပတ်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်မှာစတင် (30 ကုသ6/ ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း-HCl, ip mg) ခွဲစိတ်။ နောက်ဆုံးကုသမှုအောက်ပါ4ရက်, ဦးနှောက်တစ် vibratome အပေါ် sectioned နှင့် dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတှကျအသုံးပွု, 4% paraformaldehyde နှင့်အတူ fixed ခဲ့ကြသည်။
14-gauge NAc လာကြတယ် 1 မီလီမီတာ Coronal အပိုင်းကနေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သံမဏိ mouse ကိုဦးနှောက် matrix ကိုသုံးပြီးရယူ protease နှင့် phosphatase inhibitors်1 M က HEPES lysis ကြားခံ (1% SDS) တွင် sonicated ခဲ့ကြသည်။ 10-စုစုပေါင်းပရိုတိန်း၏ 30 μgနမူနာ 18% SDS gels အပေါ် electrophoresed ခဲ့ကြသည်။ ပရိုတိန်း PVDF အမြှေးပါးမှလွှဲပြောင်းနဲ့ anti-H3K9me2 (mouse ကို monoclonal, 1: 500) တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်, Anti-β-tubulin (mouse ကို monoclonal, 1: 60,000), Anti-စုစုပေါင်း histone H3 (ယုန် polyclonal, 1: 5,000), Anti-GFP (လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်တစ်ရှူးအတွက်တန်းတူဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်၏စိစစ်အတည်ပြုအတှကျအသုံးပွု) (ယုန် polyclonal, 1: 1000), Anti-H3K27me3 (ယုန် polyclonal, 1: 500) သို့မဟုတ် Anti-actin ပဋိ ​​(mouse ကို monoclonal, 1: 60,000) နေ့ချင်းညချင်းမှာ ကို C °4(အားလုံးအမြှေးပါး 5% နို့သို့မဟုတ် 5% bovine သွေးရည်ကြည် albumin ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြသည်။ ) 1: အမြှေးပါးထို့နောက် peroxidase-တံဆိပ်ကပ်အလယ်တန်းပဋိ (15,000 နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်-1: 60,000 အသုံးပြုတဲ့မူလတန်းကျောင်း antibody ကိုပေါ် မူတည်. ) နှင့်ခညျြအနှော SuperSignal အနောက်အီရတ်တွင်အလွှာကို အသုံးပြု. မြင်ခဲ့ကြသည်။ ခညျြအနှောညျြအနှော actin သို့မဟုတ်β-tubulin ဖြစ်စေရန်နှင့်တန်းတူတင်ဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်စုစုပေါင်း histone H3 မှပုံမှန်ခဲ့ကြသည် NIH Image ကို J ကို Software များနှင့် H9K2me3 နှင့်အတူ quantified ခဲ့ကြသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲကိုကင်း (actin ၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ S8) သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း histone3(သင်္ဘောသဖန်း။ S1) ကို NAc ၌တည်၏။ ထို့အပွငျ HSV-G9a-GFP နှင့် HSV-G9aH1093K-GFP ရောဂါကူးစက်မှုကို (NAc အတွက်β-tubulin စုစုပေါင်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သင်္ဘောသဖန်း။ S8).
ကြွက် (chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်တစ်ဦးသေစေလောက်ထိုးနှင့်အတူ sedated နှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဆ immunohistochemistry အားဖြင့်သုံးသပ်မခံရမီ 4% paraformaldehyde နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်S6) ။ အတိုချုပ်, Post-fixed ဦးနှောက် 30 μm (dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတှကျအသုံးပွုဦးနှောက် 35% sucrose ၏မရှိခြင်းအတွက် 100 μmကဏ္ဍများမှာ vibratome အပေါ် sectioned ခဲ့ကြသည်) မှာ sectioned မခံရမီ 30% sucrose အတွက်နေ့ချင်းညချင်းအခန်းအပူချိန်မှာနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ အခမဲ့-floating NAc ကဏ္ဍများ, 1X PBS နှင့်အတူဆေးကြော (3% ပုံမှန်မြည်းသွေးရည်ကြည်, 0.1% tritonX, 1X PBS) ပိတ်ဆို့နောက်ပိုင်းတွင် Anti-GFP (ကြက်သား polyclonal, 1: 8000) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်နှင့် / သို့မဟုတ် Anti-G9a (ယုန် polyclonal , 1: ဖြေရှင်းချက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် 500) ပဋိ။ dendritic ကျောရိုးများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကဏ္ဍများ 1 မှာယုန် polyclonal Anti-GFP antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: 200 ။ နေ့ချင်းညချင်းပေါက်ဖွားပြီးနောက် NAc ကဏ္ဍများ3နာရီဖြေရှင်းချက်ပိတ်ဆို့ခြင်း 10X PBS အတွက် Cy1 နှင့် / သို့မဟုတ် Cy2 ချောင်း-coupled အလယ်တန်းပဋိနှင့်အတူပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, 3X PBS နှင့်အတူ 1 မိနစ်2ကြိမ်နှင့်ဆေးခဲ့သည်။ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုကဏ္ဍများအခန်းအပူချိန်မှာနေ့ချင်းညချင်းအလယ်တန်း antibody ကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ 1 မိနစ်: နျူကလီးယား Co-အစွန်းအထင်း DAPI (1 50,000) ပါဝင်တဲ့ 10X PBS အတွက်ကဏ္ဍများ incubating ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကဏ္ဍများတစ်ဖန်ပြန်လည်ဆေးကြောအီသနောရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့် DPX နှင့်အတူ mounting ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကဏ္ဍများ confocal microscopy သုံးပြီး imaged ခဲ့ကြသည်။
RNA အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ qPCR
နှစ် ဦး နှစ်ဖက် 14-gauge NAc လာကြတယ်တွေဟာ Trizol မှာတစ်သားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ RNA ကို RNAesy Micro ကော်လံဖြင့်သန့်စင်ပေးခဲ့ပြီး Spectroscopy သည် RNA 260/280 နှင့် 260/230 ခွဲတမ်းများသည် ၁.၈ ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် RNA သည် Bio-Rad iScript Kit ကို အသုံးပြု၍ ကူးရေးသည်။ cDNA ကို SYBR အစိမ်းရောင် သုံး၍ qPCR ဖြင့်တွက်ချက်သည်။ တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုပုံတူပွားခြင်း (သို့) သုံးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခင်က glyceraldehyde-1.8-phosphate dehydrogenase (GAPDH) ကိုပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းΔΔCtနည်းလမ်းဖြင့်လေ့လာခဲ့သည်။S7) ။ မြင် ဖြည့်စွက်ဇယား S5 mRNA primer ပာသည်။
DNA ကို microarray ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
လေးအုပ်စုများ (အုပ်စုတစ်စုနှုန်း3လွတ်လပ်သောဇီဝပွား) 12 microarrays စုစုပေါင်းသည် microarray လေ့လာမှုအဘို့အအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ကိုကင်းဆေးထိုးအောက်ပါ 1 နာရီ, တိရိစ္ဆာန်များလျှင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်များနှင့်ရေခဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ NAc ၏ခှဲစိတျတစ် 15-gauge အပ်လာကြတယ်သုံးပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်နှင့် RNA ဖြည်ချသည်အထိလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ နှစ်နိုင်ငံလာကြတယ်အုပ်စုတစ်စုနှုန်း 12 ကြွက်စုစုပေါင်းပွားနှုန်းလေးတိရိစ္ဆာန်များကနေထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခဲ့ကြသည်။ RNA အထီးကျန်မှုတွေ, microarray အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြS8) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း RNA ကိုသီးခြားသန့်စင်ပြီး Agilent's Bioanalyzer ကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးစစ်ဆေးသည်။ Illumina MouseWG-6 v2.0 arrays များသို့ပြောင်းပြန်ကူးယူခြင်း၊ ချဲ့ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအား UT Southwestern ၏ microarray core မှစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Raw data များသည် Beadstudio software ကို အသုံးပြု၍ နောက်ခံနုတ်ယူပြီး quantile စံပြုခဲ့သည်။ ပုံမှန်ဒေတာ GeneSpring software ကိုသုံးပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်နှင့် genelists p <1.3 ၏ non- တင်းကြပ် p- တန်ဖိုးကို cutoff နှင့်အတူဒွန်တွဲတဲ့ 0.05 ခြံပြောင်းလဲမှု cutoff ၏အရေးပါမှုကိုစံသုံးပြီးထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့တော်တော်များများအကြောင်းပြချက်ဤဒေတာအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဒီဂရီကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ပထမဦးစွာအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကိုင်တွယ်ကုသနဲ့ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအပေါင်းတို့, RNA နှင့်စစ်ခင်းကျင်းအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာကျနော်တို့ (အားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကွဲပြားမှုအသေးအဖွဲများနှင့်စာရင်းအင်းပါဝါတိုးမြှင့်, triplicate Array ကိုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်စစ်ခင်းကျင်းနမူနာနှုန်းမျိုးစုံတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှS9) ။ ဤအစံ intersite reproducibility နှင့်မြတ်နှင့် intraplatform reproducibility ၏မြင့်မားသောဘွဲ့များကိုအတည်ပြုပြီအဖြစ်တတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုသော data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစံ (ပု MicroArray အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းကြောင့်အကြံပြုကြသည်S10-S11).
ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း
ကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်အားနည်းချက်ကိုသွင်းအရွယ်အစားကန့်သတ်ခြင်း, wildtype G9a (G9a) သို့မဟုတ် catalytically သေပြီ G9a (G9aH1093K) ဖြစ်စေဘို့ coding ပာလူ့ချက်ချင်းအစောပိုင်း cytomegalovirus ကမကထ (CMV) (ပု G1005a များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် GFP ဖော်ပြသည့် bicistronic p9 + HSV plasmid သို့ subcloned ခဲ့ကြသည် ဒါဆို insertion အရွယ်အစား AAV-3.96 virus သယ်ဆောင်များအတွက်အများဆုံးသွင်းအရွယ်အစားထက်ကျော်လွန်အရာ ~2kb) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ IE4 /5ကမကထ G9a စကားရပ်မောင်း။ Klenow နှင့်အတူတုံးအဆုံး ligations PmeI နှင့် EcoRI (pcDNA1005 ထံမှ) G9a ကြေညက်ခြင်းနှင့် CIP EcoRI အစာခြေအောက်ပါ p3.1 + ကုသကုသမှတဆင့်အပိုင်းအစများကိုအဆိုပါ bicistronic p1005 + HSV plasmid သို့ subcloned ခဲ့ကြသည်။ HSV-ΔJunD-GFP ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် EcoRI ကန့်သတ်က်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့် flanked ΔJunD၏နိုင်တဲ့ coding sequence ကိုပု EcoRI site ကိုပါဝင်တဲ့ primer oligonucleotides သုံးပြီး PCR အားဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ PCR ထုတ်ကုန်ထို့နောက် p1005 + အားနည်းချက်ကို၏ EcoRI site ကိုသို့ ligated ခဲ့သည်။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ NAc အာရုံခံအတွက် Cre recombinase ၏ဒေသခံစကားရပ် (တစ်ဦး AAV အားနည်းချက်ကိုသုံးပြီးဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇပေးပို့နေဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်S12) ။ Cre မှ GFP သို့မဟုတ် GFP တစ်ဦး N-terminal ကိုပေါင်းစပ်တဲ့ splice အလှူရှင်လက်ခံ sequence ကိုနှင့် polyadenylation signal ကိုအတူ CMV ကမကထင်တစ်ဦး recombinant AAV-2 အားနည်းချက်ကိုသို့ subcloned ခဲ့သည်။ အားလုံးအားနည်းချက်ကို INSERT dideoxy-အစီအစဉ်ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦးသုံးဆ-transfection, အထောက်အ-အခမဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်S13) ။ သန့်ဗိုင်းရပ်စ် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အရည်အသွေး HEK293 ဆဲလ်တွေအတွက်အကဲဖြတ်ကူးစက် titer အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ AAV-ΔFosB-GFP ဗိုင်းရပ်စ်အလားတူပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ IE4 /5ကမကထဆန့်ကျင်အဖြစ် HSV-Cre အဘို့, Cre စကားရပ် (တွေ့မြင် Cre စကားရပ် minimize နှင့်အာရုံခံအဆိပ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်, တစ်ခု IRES ကမကထမောင်းနှင်ခဲ့သည် S14 ) ဗိုင်းရပ်စ်ဆောက်လုပ်ရေးသည်။ အားလုံးကိစ္စများတွင်ဗိုင်းရပ်စ် overexpression နှစ်ဦးစလုံး, အတည်ပြုခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက်, qPCR မှတဆင့်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် immunohistochemically ခွဲစိတ်အောက်ပါ NAc-ကန့်သတ်စကားရပ်ဖော်ပြရန်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။
ketamine အောက် (100 / ကီလိုဂရမ် mg) / xylazine (10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) မေ့ဆေး, ကြွက်ငယ်လေးတစ်-တိရိစ္ဆာန် stereotaxic တူရိယာထဲမှာနေရာယူထားခဲ့ကြသည်, ထို cranial မျက်နှာပြင်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ပြွတ်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်မြန်မာနိုင်ငံသထောင့်ဒီဂရီတစ် 0.5 မှာ NAc သို့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏μl 10 မသွားအောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သုံးဆယ်သုံးရက် gauge (AP + 1.6; ML + 1.5; DV - 4.4) μl / မိနစ် 0.1 တစ်မှုနှုန်းမှာ။ AAV virus သယ်ဆောင်လက်ခံရရှိအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြွက်အေးစက်နေရာချထားခံရမီ2နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်စဉ် HSV ထိုးလက်ခံရရှိတိရစ္ဆာန်များ, ခွဲစိတ်အောက်ပါ 20 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကြိမ်နှစ်ခု virus သယ်ဆောင်ဘို့လုပျသငျဗိုင်းရပ်စ်-mediated Transgene စကားရပ်၏ကာလနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ BIX01294 တာဟာအဘို့နှစ်ခု Mini-ပန့်များတစ်ခုချင်းစီမောက်ရဲ့ကျောဘက်မှာအရေပြားအောက်ဆုံး positioned ခဲ့ကြသည်။ Cannulae နေရာချထားမှုကိုအဆိုပါ NAc အထက်တွင်ငယ်နှစ် cranial တွင်းတူးအသုံးပြုပုံနှင့် bregma ထံမှ cannula များ၏ပို့ဆောင်မှုအားဖြင့် (AP + 1.5; ML + 1.0; DV - 5.4) အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ ကြွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကင်းဖို့ရာအရပျအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအစမပြုမီ4ရက်5များအတွက်ခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထိုအရပ်ကိုအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါပြုပြင်မွမ်းမံ (အတူကောက်ယူခဲ့သည်S7) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့် HSV-G3a-GFP၊ HSV-G9aH9K-GFP သို့မဟုတ် HSV-GFP ၏အပြန်အလှန် NAc ထိုးသွင်းမှုသုံးခုပြီးနောက်ကြွက်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်သုံးခုပါ ၀ င်သောအေးစက်ခန်းများထဲသို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အေးစက်နေသောအခန်းနှစ်ခုအနက်မှသိသိသာသာကြိုက်နှစ်သက်သောကြွက်များအားလေ့လာမှုမှ (တိရိစ္ဆာန်များအားလုံး၏ <၁၀%) မှဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်သည့်မည်သည့်အခန်းလိုက်ဘက်လိုက်မှုအတွက်ညှိရန်အုပ်စုများကိုမျှမျှတတညှိနှိုင်းခဲ့သည်။ နောက်ရက်များ၌တိရိစ္ဆာန်များကိုဆားဖြင့်ထိုးသွင်းပြီးနေ့လည်ပိုင်းတွင်မိနစ် ၃၀ ခန့်အခန်းတစ်ခန်းထဲထည့်သွင်းကာကိုကင်း (၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) ဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ပြီးညနေပိုင်း၌အခြားအခန်းသို့မိနစ် ၃၀ ကြာည (၂) ရက်ခန့်ချုပ်ထားသည်။ ဆားနှစ်ခုကိုကင်းတွဲဖက်မှု) ။ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သည့်နေ့တွင်ကြွက်များကိုကုသမှုမပေးဘဲမိနစ် ၂၀ အတွင်းပြန်လည်ထားရှိခဲ့ပြီးမည်သည့်အပိုင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်ကိုကင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခန်းများအတွင်းရှိရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းများမှတစ်ဆင့်ကိုကင်း၏ Locomotor တုံ့ပြန်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ AAV နှင့် BIX1093 CPP စမ်းသပ်ချက်များအတွက်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသော protocol ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုနောက်တဖန်ဆား (သို့) ကိုကင်း (၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip) ဖြင့်ထပ်မံထိုးသွင်းခဲ့ပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းတိကျတဲ့အခန်းများသို့ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့သည်။ သို့သော် ၄ ရက်တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်ပြီးနောက် ၅ ရက်တွင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ည ဦး ယံ၌နှင့်အေးစက်ကုသမှု alternated ခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုအားလုံးအတွက်၊ အခြေခံအားဖြင့်ရွေ့လျားသောရွေ့လျားမှုကိုဆားကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ရွေ့လျားမှုကိုဗိုင်းရပ်စ် (သို့) inhibitor ကုသမှုမှမထိခိုက်စေရန်သေချာစေသည်။
အထီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို Long-အီဗန်ကြွက်, ထိုစမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 230-250 ဂရမ်အလေးချိန်ရယူခဲ့ကြသည်။ အတူ: သူတို့ (12 နံနက်9မှာချွတ်ထွန်း) / တစ်ပြောင်းပြန် 00 နာရီအလင်းအပေါ်တစ်ဦး humidity- နှင့်အပူချိန်-controlled ပတ်ဝန်းကျင်လည်းမှောင်မိုက်သံသရာသျောခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum အစားအစာနှင့်ရေရရှိမှု။ ကြွက်ကသူတို့အသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် acclimate ခွင့်ပြုခဲ့သည်များနှင့်စမ်းသပ်မှုများမစတင်မှီ 1 တစ်ပတ်နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသားအင်စတီကျုနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်သိနာတောင်ပေါ်ရဲ့တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ locomotor အပြုအမူတိုင်းတာရန်နီအောက်ရောင်ခြည်ထုပ်နှင့်အတူတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ self-အုပ်ချုပ်ရေးယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် (S15-S16) isoflurane (2.4-2.7%) မေ့ဆေးအောက်မှာလက်ျာ jugular သွေးကြောထဲသို့ implants ပြွန်နှင့်အတူ။ ပြွန်များကို 0.1 U heparin နှင့် ampicillin (10 mg / kg) ပါ ၀ င်သောဆားအရည်၏ ၀.၁ ml ဖြင့်သုတ်လိမ်းခဲ့သည်။ တစ်ပတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်းသည်အလင်း / အမှောင်သံသရာ၏အမှောင်ထုအဆင့်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ တိကျသောအချိုးအစား -၁၁ (FR50) အားဖြည့်သည့်အစီအစဉ်အရတိရိစ္ဆာန်များအားကိုကင်း (၀.၇၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် / ပြုတ်ရည်) ကိုနေ့စဉ် ၃ နာရီအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ (၆) ရက်အကြာတွင်ကြွက်များသည်ကိုကင်းပမာဏကိုတည်ငြိမ်စေသည် (၃ ရက်ဆက်တိုက်တုန့်ပြန်မှုနှုန်း ၁၅% ကွဲပြားပြီးအနည်းဆုံး ၇၅% ကလီဗာကိုအားဖြည့်ပေးသည်) ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်အပြီးတွင် ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကြွက်များကိုအလျင်အမြန်ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဦး နှောက်ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် RNA သီးခြားခွဲခြားခြင်းနှင့် qPCR အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လတ်ဆတ်တဲ့ NAc လာကြတယ် (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ chip များအတွက် Cross-နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ကိုပြင်ဆင် Formaldehyde ခဲ့ကြသည်S17-S18) အသေးစားပြုပြင်မွမ်းမံအတူ။ အတိုချုပ်, တိရစ္ဆာန်နှုန်း414-gauge NAc လာကြတယ် (နမူနာနှုန်းထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှ5တိရိစ္ဆာန်များ) -1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအေးခဲနေသောမတိုင်မီ 2% Formaldehyde နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော, စုဆောင်း 80 M က glycine နှင့်အတူမီးမငြိမ်းခဲ့ကြသည်။ 1 နေ့ကသံလိုက်ပုတီး Anti-G9a (ယုန် polyclonal chip တန်း) သို့မဟုတ် Anti-H3K9me2 (mouse ကို monoclonal chip တန်း) တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူသင့်လျော်သောသံလိုက်ပုတီး incubating ကပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် IgG (မိုးရွာသွန်းမှု antibody ကိုပေါ် မူတည်. ) Sonic, သိုး Anti-ယုန် / mouse ကိုအမြည်းမှကြိုတင် နေ့ချင်းညချင်း4မှာပဋိပိတ်ပင်တားဆီးမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်အောက်မှာကို C °။ တစ်ရှူး Sonic နှင့် chromatin မှေးကိုယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြ (S17) ။ Sonic ပြီးနောက် chromatin ၏တန်းတူပြင်းအားသစ်ကိုပြွန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်များနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏ ~ 5% '' input ကို '' ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အစေခံသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ conjugation ပုတီး / antibody ကိုအရောနှောများစေ့စေ့စပ်စပ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် resuspension ပြီးနောက် antibody ကို / ပုတီးအရောနှောများတန်းတူ volumes ကို (~ 7.5 μg antibody ကို / နမူနာ) တစ်ဦးချင်းစီ chromatin နမူနာထည့်သွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့် 16 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်အောက်မှာ ~4နာရီနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး။ နမူနာတစ်ခု PCR သန့်စင်ကိရိယာအစုံသုံးပြီးညအိပ် DNA ကိုသန့်စင်မတိုင်မီထပ်မံဆေးကြောခဲ့ကြခြင်းနှင့် 65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ Cross-နှင့်ဆက်စပ် reverse ။ DNA ကိုသန့်စင်ပြီးနောက်နမူနာ qPCR အကြောင်းမဲ့နှင့်၎င်းတို့၏သင့်လျော်သော '' input ကို 'ရန်ပုံမှန်ကြ၏ (ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ထိန်းချုပ်S17) ။ မောက် polyclonal Anti-IgG antibody ကိုသုံးပြီးပုံမှန် mouse ကို IgG immunoprecipitative လည်း signal ကိုချဲ့ထွင်၏သင့်လျော်သောသန့်စင်ဘို့ထိန်းချုပ်ဖို့ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အက်ဒနင်း phosphoribosyltransferase (APRT) ကိုကင်းနှင့်အΔFosB overexpression စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအနှုတ်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြင် ဖြည့်စွက်ဇယား S5 ကမကထ primer ပာသည်။
Vivo အတွက်အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် G9a ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာဖို့, ကျွန်တော်အရင်ကအောက်ပါပြုပြင်မွမ်းမံ (နဲ့အတူဖော်ပြထားနည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့S1) ။ သုံးရက် G9a များတွင်အသုံးပြု HSV-GFP, HSV-G57a-GFP, HSV-ΔJunD-GFP (အားလုံးဗိုင်းရပ်စ် wildtype C6Bl / 9J ကြွက်များတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်), သို့မဟုတ် HSV-Cre-GFP (၏ဆေးထိုးပြီးနောက်FL / FL ဗိုင်းရပ်စ်စကားရပ်အကျယ်ချဲ့စဉ်အခါ, ကြွက် perfused ခဲ့ကြသည်ကြွက်), ဦးနှောက် cryoprotected နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး vibratome အပေါ် 100 μmမှာ sectioned ခဲ့ကြသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကဏ္ဍများထို့နောက် (Immunohistochemistry ကိုကြည့်ပါ) GFP ဆန့်ကျင်ကာ antibody ကို အသုံးပြု. immunostained ခဲ့ကြသည်။ ကျောရိုးနံပါတ်များပေါ်တွင် G9a overexpression နှင့်နောက်ကောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အဖြစ်ΔJunD overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အာရုံခံဆဲလျနှုန်း 1-2 neurites GFP-ဖော်ပြ NAc အလတ်စားကနေအလယ်တန်း dendrites အနည်းဆုံး 299 μmတန်းတူအပေါ်ကျောရိုး၏နံပါတ်တိုင်းတာ spiny အာရုံခံ (MSNs) ။ MSNs HSV အဓိကအားဒီဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အာရုံခံဖော်ပြ DARPP-32 (ကူးစက်ကြောင်းညွှန်ပြသည့် NAc အခြားအာရုံခံလူဦးရေအဖြစ်ယခင်အစီရင်ခံစာများအနေဖြင့် morphologically ကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းပေးထားS19), ကျနော်တို့ MSNs သီးသန့်ဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်, ကြှနျုပျတို့ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်အဘို့အရယူခဲ့သောပြီးနောက်အုပ်စုတစ်စုနှုန်း 6-8 တိရိစ္ဆာန်များ (3 အုပ်စုများ), အတွက် ~ 4-7 အာရုံခံဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ NAc ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအပေါ်ΔFosB overexpression ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်ချက် AAV virus သယ်ဆောင်အချိန်တိုးချဲ့ကာလ (8 ရက်သတ္တပတ်) အတွက် GFP သို့မဟုတ်ΔFosB-GFP ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောချွင်းချက်အတူအထက်တွင်ဖော်ပြထားကြောင်းမှအလားတူသယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံး HSV ပုံရိပ်တွေ (AAV ပုံရိပ်တွေဟာ 100X ရေနံ-နှစ်မြှုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်) တစ်ဦး 63X ရေနံ-နှစ်မြှုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦး confocal ဏုသုံးပြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေ 1 မတရားယူနစ်မှာပေါက်ကိုဖောက်ပေးထားတယ်အစုံနှင့် 1024 × 1024 ဘောင်အရွယ်အစားနှင့်အတူဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ Dendritic အရှည် NIH Image ကို J ကို software ကိုသုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်နှင့်ဆလိုက်ကြိုတင်စမ်းသပ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မှ coded ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျောရိုးနံပါတ်များ, မူလတန်းစမ်းသပ်နေဖြင့်မျက်စိကန်းရေတွက်ခဲ့သည်။ dendrite ၏ 10 μmနှုန်းကျောရိုး၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်ကတွက်ချက်ခဲ့သည်။
One- နှင့် Two-လမ်း ANOVAs conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ပိုမိုထက်အုပ်စုနှစ်စုနှင့်အတူ dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အဓိပ်ပာယျသတျမှတျဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားရဲ့အ t ကိုစမ်းသပ်မှု qPCR အနောက်ပိုင်းချေ, G9a အတွက် HSV-Cre မှ HSV-GFP နှိုင်းယှဉ် dendritic ကျောရိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်အခြားနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်FL / FL ကြွက်တွေ, microarray ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (အထက်တွင်ကြည့်ပါ) နှင့် chromatin immunoprecipitation စမ်းသပ်ချက်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုများအတည်ပြုချက်နှင့်အတူ osFosB အလွန်အကျွံဖိအားပေးပြီးနောက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကို ANOVA ၏နှစ်ဖက်သဘောထားဆန်းစစ်မှုအပြီးတွင်စီစဉ်ထားသောကျောင်းသား၏စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံ၏ဒဏ္inာရီတွင်ပါ ၀ င်သည့်တန်ဖိုးအားလုံးသည်±± SEM (* p ≤ 0.05; ** p <0.001) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အသေးစိတ်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1-3 အသေးစိတ်ပုံ Legends အပါအဝငျစာရင်းအင်းများ: main စာသားထဲမှာအတွက်ပေးအပ်ထားတယ်။
ငါပစ္စည်းများအဘယ်သူအားမျှခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွင်းထည့်သွင်းကြောင်းအတည်ပြု ကင်း-သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်ထဲမှာ Histone Methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခန်းက္ပ ယခင်ကထုတ်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအပါအဝင်အခြားနေရာများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာရှိပါတယ်ပါပြီ။
တိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးအလုပ်တက္ကသိုလ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာနဲ့ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်းနှစ်ဦးစလုံးမှာအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် IACUC လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီကောက်ယူခဲ့သည်။
1 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 33 ။ [PubMed]
2 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2006; 29: 565 ။ [PubMed]
3 ။ Kumar ကတစ်ဦး, et al ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 303 ။ [PubMed]
4 ။ et al Renthal W က။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007; 56: 517 ။ [PubMed]
5 ။ et al Renthal W က။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7344 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ et al Renthal W က။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 62: 335 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Stipanovich တစ်ဦးက, et al ။ သဘာဝ။ 2008; 453: 879 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ Borrelli အီး, Nestler EJ, မဟာမိတ်များ CD ကို, Sassone-Corsi P. အာရုံခံ။ 2008; 60: 961 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Brami-Cherrier K ကို Roze, E, Girault ဂျာ Betuing S က, Caboche ဂျေ JNeurochem ။ 2009; 108: 1323 ။ [PubMed]
10 ။ Tachibana က M, Sugimoto K ကိုဖူကူရှီးမား T က, Shinkai Y. J ကို Biol Chem ။ 2001; 276: 25309 ။ [PubMed]
11 ။ Nestler EJ ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန်, B, Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3245 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208 ။ [PubMed]
13 ။ et al Kelz ကို MB ။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272 ။ [PubMed]
14 ။ et al Sampath SC ။ Mol ဆဲလ်။ 2007; 27: 596 ။ [PubMed]
15 ။ Kubicek S က, et al ။ Mol ဆဲလ်။ 2007; 25: 473 ။ [PubMed]
16 ။ et al Chang-Y ကို။ နတ် Struct Mol Biol ။ 2009; 16: 312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 8491 ။ [PubMed]
18 ။ Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေသဘာဝတရား။ 2001; 411: 583 ။ [PubMed]
19 ။ သောမတ်စ် MJ, Malenka RC ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2003; 358: 815 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Russo SJ, et al ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 3529 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ et al Bibb ဂျာ။ သဘာဝ။ 2001; 410: 376 ။ [PubMed]
22 ။ et al Norrholm SD က။ neuroscience ။ 2003; 116: 19 ။ [PubMed]
23 ။ Pulipparacharuvil S က, et al ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 621 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Ujike H ကို, Takaki က M, Kodama က M, Kuroda အက်စ်အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2002; 965: 55 ။ [PubMed]
25 ။ Toda က S, et al ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 1579 ။ [PubMed]
26 ။ ဂရေဟမ် DL ။ နတ် neuroscience ။ 2007; 10: 1029 ။ [PubMed]
27 ။ et al Lee က KW ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 3399 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ P01 DA08227 (EJN), R01 DA07359 (EJN), နှင့် P0110044 (PG): ဒီအလုပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။